रोजगारी/समृद्धि – Page5– धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका
लोकगीतसङ्गीतको उर्वर भुमि गण्डकी अञ्चलको स्याङ्जा जिल्लाले हालसम्म थुप्रै सर्जक कलाकार जन्माइसकेको छ। यसै सिलसिलामा कलाकारको लाइनमा पंक्तिबद्ध हुन आएकी छिन् गायिका बबिता गुरुङ्ग। रहरले सांगीतिक क्षेत्रमा आउने, एकाध गीत गाउने, आफ्नै एल्बम निकाल्ने , अनि केही समयपछि बाटो मोड्ने। यस्तो जमात बढिरहेको समयमा लोकसांगीतिक क्षेत्रमा..
तामाङ समुदायको विशेष पर्व सोनाम ल्होसार विविध कार्यक्रम गरी देश विदेशमा मनाइँदै छ । प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल प्रतिपदाका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी सोनाम ल्होसार पर्व मनाउने चलन छ ।धादिङ जिल्लामा पनि आज जिल्ला सदरमुकाम धादिङबेसीका साथै तामाङ समुदायको वसोवास रहेका गाउँ वस्तिहरुमा विभिन्न कार्यक्रम गरी ल्होसार मनाईदैछ । मञ्जुश्री..
रूकुम: रूकुममा एउटा यस्तो परम्परागत संस्कृति छ जुन बेला किशोरी–किशोरी विवाह गर्ने चलन छ । तर, पक्कापक्की होइन, औपचारिकताका लागि देखावटी विवाह हुने गर्छ । यस्तो संस्कृति रूकुमको सिम्ली– मगरराङ्जामा प्रचलनमा रहेको हो । दुई किशोरीलाई दुलाहा–दुलहीका रूपमा सिँगारेर विवाह सम्पन्न गरेपछि मेला पनि सकिने परम्परा छ । किशोरी–किशोरीलाई..
धादिङ-धादिङ जिल्लाका विभिन्न गाउँ विकास समितिमा छरिएर रहेको दुवाडीहरु संगठीत भएका छन । सदरमुकाम धादिङवेशीमा जिल्लाभरका दुवाडीहरुहरुको भेला आयोजना गरि ११ सदस्यीय आत्रेय गोत्रिय दुवाडी सेवा समाज धादिङ शाखाको गठन गरिएको छ । समाजको अध्यक्षमा ढोलाका केशवराज दुवाडी, उपाध्यक्षमा शालिग्राम दुवाडी, सचिवमा मनिष दुवाडी, सहसचिवमा..
तपाईंको साप्ताहिक राशिफल (आश्विन २२ गतेदेखि २८ गते सम्म)
मेष: परिवारको सहयोगले महत्वपूर्ण काम थालनी गर्ने अवसर मिल्नेछ । रमाइलो यात्राको अवसर मिल्नेछ । आकस्मिक धन लाभ हुनेछ । अध्ययन अध्यापनमा प्रगति हुनेछ । साहित्यिक काममा रुची बढ्नेछ । प्राविधिक काममा सफलता मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउने देखिन्छ । दाजुभाईसंग मनमुटाब हुने सम्भावना देखिन्छ । वृष: स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ । अध्ययन..
सुबिसुधाको म्युजिक भिडियो ‘तप्कन खोज्छन्’ सार्वजनिक-
पत्रकारिता र साहित्य लेखनमा सक्रिय सुबिसुधा आचार्यको काब्यसुधा गीतिसंग्रहमा संकलित 'तप्कन खोज्छन्....' बोलको आधुनिक गीतको म्यूजिक भिडियो आलाप रेकर्डिड• स्टुडियोले काठमाडौंमा एक कार्यक्रम बिच सार्वजनिक गरेको छ । सुमधुर स्वरका धनी मनोजराजको स्वर रहेको उक्त गीतमा झलक संगीतम् को संगीत रहेको छ भने म्यूजिक भिडियोको निर्देशन कमल वलीले गरेका..
आमा र मेरो तीज
-सुशिला शर्मा (अतृप्ती) मैदी, धादिङ हाल-भ्यान्कुभर, क्यानाडा आमा ! हजुर आज दिनभर मन्दिरमा गएर नाच्नुभयो होला है ! मनको प्रिय कुनामा म कान्छी छोरीको खुब मिस गर्दै मेरो उपस्थिति दिदीको हसिलो मुहारमा अलिकति पाउनुभयो होला केहि मल्हम र सान्त्वना अबश्य मिल्यो होला !!! आमा ! म पनि आज नाच्न जादैछु, हजुरलाई खुब मिस गर्दै गर्दै नाच्नेछु सात..